» विज्ञकै निसानामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, धेरै कमाएकै हुन् त ?
२०७८ श्रावण २५, सोमबार १४:३६
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको हरेक त्रैमास अन्त्य हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशन गर्ने वित्तीय विवरणबाट एउटा मुख्य समाचार बन्छ, ‘फलानो बैंक/वित्तीय संस्थाको नाफा यति !’ यो समाचार सबैको चाखको विषय बन्छ । वित्तीय विवरण हेर्न जान्नेले सोही नाफाका आधारमा प्रतिसेयर आम्दानी, वितरणयोग्य मुनाफा, पीई रेसियो जस्ता फन्डामेन्टल नियाल्छन् र लाभांश क्षमता पनि गणना गर्छन् ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दै ५० अर्बभन्दा बढी नाफा गरेका वाणिज्य बैंकहरूले वर्षभर ६० अर्बभन्दा बढी नाफा गरेको अनुमान लगाइएको छ । विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तको नाफा पनि त्यसरी नै बढीरहेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भर ५३ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ नाफा गरेकामा आव २०७७/७८ को ११ महिनामै ६२ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ कमाएका छन् ।
कोभिड महामारीकै माझ अघिल्लो आव २०७६/७७ मा बैंकहरूले ५४ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ नाफा गरेका थिए । आव २०७५/७६ मै उनीहरूल ६५ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ नाफा गरेको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांक छ ।
कुन आर्थिक वर्ष कति नाफा ?
१५ अर्ब ८७ करोड
२१ अर्ब ५ करोड
२१ अर्ब २९ करोड
२८ अर्ब ३८ करोड
३८ अर्ब १२ करोड
४५ अर्ब ४३ करोड
५३ अर्ब ६३ करोड
६५ अर्ब २१ करोड
५४ अर्ब ३५ करोड
आव २०७७/७८ (११ महिना)
६२ अर्ब ३६ करोड
विकास बैंक र वित्त कम्पनीको नाफा भने वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा निकै कम छ । तर, साना संस्था भएर पनि लघुवित्त कम्पनीको नाफा अधिक छ ।
हाल देशभर २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, २० वित्त कम्पनी र ७४ लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् ।
केन्द्रिय बैंकका अनुसार ३ खर्ब १९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ चुक्तापुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरूले ११ महिनामा ६२ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ कमाएका छन् । यस्तै ३२ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ चुक्तापुँजी भएका विकास बैंकले ६ अर्ब १ करोड र १४ अर्ब ९३ करोड चुक्तापुँजी भएका वित्त कम्पनीले यही अवधिमा १ अर्ब ९१ करोड कमाएका छन् । तर, २४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ चुक्तापुँजी भएका लघुवित्तहरूको कमाइ भने ८ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ छ ।
सामान्य भाषामा भन्दा वाणिज्य बैंकको प्रति १ अर्ब चुक्तापुँजीबाट १९ करोड ५२ लाख रूपैयाँ कमाइ भएको छ । यस्तै विकास बैंकले १८ करोड ७३ लाख कमाउँदा विकास बैंकले भने १२ करोड ८० लाख कमाएका छन् । जबकि विकास बैंकले १ अर्ब चुक्तापुँजीबाट ३६ करोड ५ लाख रूपैयाँ कमाइरहेका छन् ।
वित्तीय संस्थाका प्रकार
प्रति १ अर्ब चुक्तापुँजीको नाफा
३ खर्ब १९ अर्ब ३५ करोड
१९ करोड ५२ लाख
३२ अर्ब ८ करोड
६ अर्ब १ करोड
१८ करोड ७३ लाख
१४ अर्ब ९३ करोड
१ अर्ब ९१ करोड
१२ करोड ८० लाख
२४ अर्ब ३८ करोड
८ अर्ब ७९ करोड
३६ करोड ५ लाख
स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त ११ महिनाको तथ्यांक
वित्तीय संस्थाको यत्तिको नाफामा गभर्नर देखि पूर्वप्रधानमन्त्री सम्मको चासो छ ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्तहरुको नाफा धेरै भएको भन्दै त्यसतर्फ नजर लगाउने संकेत गरे । त्यसको पर्सिपल्टै पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सबैक्षेत्र लथालिंग हुँदा पनि बैंकहरुको नाफा बढेको बढ्यै गरेको बताए । भट्टराईले बैंकहरुका कारण सिमित व्यक्तिहरु मात्रै धनी हुने क्रम बढेको आरोप पनि लगाउन भ्याए ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले अधिकांश समय ब्याज बढी भएको, उद्योगधन्दा घाटामा जाँदा समेत बैंकहरुले सँधै उच्च अंकको नाफा नै गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
के बैंकहरुले धेरै नाफा कमाएकै हुन् त ? के बैंकहरु आधुनिक युगका सामन्त नै हुन त ?
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले विभिन्न प्रसंगमा “बैंकहरुमा लगानी असुरक्षित हुन थालिसक्यो । पहिले त २५ प्रतिशत प्रतिफल हुन्थ्यो, अहिले १५ प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिसक्यो । ११ भन्दा तल ओर्लिए बैंकहरुमा लगानी नगरे हुन्छ ।” भन्दै आएका छन् ।
विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षहरू पनि एउटा ३० अर्ब लगानी गरेर वार्षिक ४ अर्ब नाफा गरेको हो अर्थात् १३ प्रतिशत नाफा गरेको बताउँदै आएका छन् । जबकि अन्य क्षेत्रमा २–४ करोड लगानीबाटै त्यति धेरै नाफा हुन्छ ।
बैंकरहरु भने नाफा बढ्दै गएको भएपनि लगानीको प्रतिफल कम हुँदै आएको जिकिर गर्दै आएका छन् । यसको कारण हो, जुन दरमा बैंकमा गरिएको लगानी बढ्दै गएको छ, त्यो दरमा नाफा नबढ्नु ।
चुक्तापुँजी वृद्धि, रिजर्भमा सुधार भएसँगै सेयरधनीको कोषमा रहेको रकम अर्थात् बैंकको कुल इक्विटी व्यापक मात्रामा बढ्दा नाफामा भने सामान्य सुधार आएको छ ।
कुल इक्विटीको तुलनामा गरिएको नाफाको दरलाई बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) भनिएको हुन्छ । २०७० असार मसान्तमा २४.८३ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको औसत आरओई साढे ७ वर्षमा १३.८२ प्रतिशतमा खुम्चिएको वित्तीय विवरणले देखाउँछ ।
करिब १४ रूपैयाँ कमाउन बैंकले दुनियाँभरको कसरत गर्छन् । कर्जा लगानी गर्छन्, सेयर कारोबार गर्छन्, सञ्चालन मुनाफा सकेसम्म कम बनाउन मिहिनेत गर्छन् । नाफा देखाउनकै लागि प्रोभिजनका लागि छुट्याइएको रकम राइट ब्याक गर्छन् । यसो गर्दा पनि बैंकहरूलाई १०० रूपैयाँवापत् १४ रूपैयाँ कमाउन पनि मुस्किल परेको हुन्छ ।
अन्य व्यवसायहरुले लगानीको प्रतिफल बढाउँदै गर्दा बैंकमा गरिएको लगानीको भने प्रतिफल घट्दै जान थालेको हो ।
साढे ७ वर्षको बीचमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल इक्विटी ९६ अर्ब ६२ करोडबाट साढे ५ गुणाले बढेर ५ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधीमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी चार गुणाले बढेको छ, केहीको भने बढेर २१ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
गत आवको ९ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा ठूलो इक्विटी भएको बैंक नेपाल बैंक हो । बैंकको कुल इक्विटी ३४ अर्ब १४ करोडको छ । ग्लोबल आईएमईसँग ३२ अर्ब र नबिल बैंकसँग ३१ अर्बको इक्विटी छ । सबैभन्दा थोरै इक्विटी भएका बैंकहरु सेन्चुरी र सिभिल हुन् । उनीहरुको कुल इक्विटी क्रमशः १० अर्ब ६४ करोड र १० अर्ब ६६ करोड छ ।
अब उनीहरुले कमाएको नाफाको कुरा गरौं । २० अर्ब २३ करोड इक्विटी भएको एनआईसी एसिया बैंकले ९ महिनामा सर्वाधिक २३.२६ प्रतिशत कमाएको थियो । यस्तै १४ अर्ब ३९ करोड इक्विटी भएको सानिमाको आरओई १९.७३ प्रतिशत थियो ।
वित्तीय विवरणका आधारमा साढे ७ वर्ष अघि ९६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर बैंकहरुले १९ अर्ब कमाएका थिए । अहिले ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा नाफा ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।
हामीले माथिको प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल र वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाललाई सोध्यौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल भन्छन्:
“बैंकहरूले लगानी गरेका छन् । त्यही अनुसार नाफा गरेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत प्रतिफल १०-१२ प्रतिशत छ । त्यसलाई सामान्य मान्न सकिन्छ ।
लघुवित्तको नाफा भने औसतभन्दा बढी देखिन्छ ।”
बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्:
“गत आवमा केही बैंकहरूले सेयरमा लगानी गरेर राम्रै नाफा गरेको देखिन्छ । सेयरबाट हुने नाफा हटाएर हेर्दा बैंकहरूको यथार्थ स्थिति छर्लंगै हुन्छ ।
गत आवको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने सिटिजन्स बैंक र एनबी बैंकको विवरण हेर्दा उनीहरूको नाफा सेयर कारोबार र प्रोभिजन राइट ब्याक गरेर बढेको छर्लंगै देखिन्छ । मुख्य नाफा कोर बैंकिङ कारोबारबाट हुने नाफा हो । अरू माध्यमबाट आक्कलझुक्कलमात्र कमाइ हुन्छ ।
अर्थविद्, पूर्व अर्थ तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यू साढे ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको स्प्रेडदरबारे अपडेटेड हुनुहुन्न जस्तो छ ।
बैंकहरूको हेर्ने भनेको सञ्चालन मुनाफा हो । त्यसको मुख्य तत्व स्प्रेड दर हो । अहिले स्प्रेड ५ बाट ३.५ प्रतिशत खुम्चिएको छ । मर्ज र अक्वायर गर्नेबाहेक बैंकहरूको खुद ब्याज मुनाफा घटेको छ ।”